Home Wararka Debinka Guddoonka Golaha Shacbiga ee Xil ka Qaadista RW Rooble.
Debinka Guddoonka Golaha Shacbiga ee Xil ka Qaadista RW Rooble.
Waxaa baraha Bulshada wareegaya waraaq iyo Ogeysiis marin habaabin ah oo lagu sheegayo in golaha shacbiga aysan sameyn doonin Sabtiga 1-da May xilka ka qaadis RW Dalka Mudane Maxamed Xuseen Rooble. Hadalkan oo ka dhasahy shacbiga oo fahmaya Khiyaanada Farmajo iyo Gudoonka Galaha Shacbiga.
Shacbiga Somaliyeed waxay og yihiin sidii foolxumada lahayd, ee sharcidarrada ahayd oo been abuurka ahayd oo uu guddoonka golaha shacbiga u dhaqmay markii la lahaa kalsoonida ayaa lagala noqday RW Kheyre.
Iyadoo golaha loo ballamiyey hawl kale ayaa waxaa daqiiqado lagu hor loo keenay Gudoomiyaha Golaha Shacabka Maxmed Mursal waraaq u sheegeysa inuu xilka ka qaado RW dalka waanu ka qaaday isagoon marnaba u haynin wax sharciyada ah oo Xildhibaanno goobta joogay ay sheegayaan inaan la tirin oo codka uusan ansax ahayn, looma yeerin RW oo lama eedeyn, laakiin sidii inuu ka shaqeeyo dukaan uu leeyahay Farmajo ayaa la yiri waa lagaa qaaday.
Haddaba shacbiga iyagoo dhaqanxumada guddoonka golaha shacbiga,ku tumashada Distuurka Madaxtooyada iyo jaahilnimada ay golaha u horseeday ayaa dadka Somaliyeed waxay welwel ka qaboon in Farmajo si uu qalalaase kale u abuuro:
In marka la hubsado inuuu kooramka (guntinta) golaha ay dhantay Email laga soo diro Villada loo soo daabaco Mursal, kadibna uu sameeo sidii uu sameyey xeligii uu ridayey Kheyre, taas yaa damaanad qaadaya in Mursal uu iimaan, karti, iyo waddanimo u korortay ilaa markaas.
In Villada aysan qorsheyneyn in ay xilka laga qaaddo RW Rooble kadib markii uu taageray doorashadii dadbaneyd oo uu horay u taageeray RW Kheyre, kadibna sidaas lagu riday.
Iyo tan ugu darran oo Farmajo beerka ka qabatay oo ah in uu si cad u sheegay RW in dalka uu doorasho u dhaqaaqayo laguna dul shaqeynayo heshiiskii 17 Setember 2020.
Sidaa darted, guddoonka golaha shacbiga oo mar waliba ahaa shakhsiyaad jeebka ugu jiro villda iyo Farmajo, isla markaana aan lahayn go’aan iyaga u gaar ah oo ka turjumayo golaha u doortay inay guddoomiyaan ayaan la aamini Karin.
Ogaada heeshiiska 17 Setember 2020 ma ahan kama dambeys oo waa in la bilaabo sidii loo hawl gelin lahaa heshiiska oo looga dhigi lahaa mid lagu shaqeyn karo.
Marka shacbiga marnaba ma aaminayaan beenta iyo haddalada ay dabada ka riixayaan Villada oo ah in aan xilka laga qaadeyn RW Rooble maadaama uu taageeray in doorashadii uu Farmajo diidanaa la qabto, loona noqonayo 17 Setember 2020.
Talada ugu wanaagsan waa in
shirkaba la joojiyo inta uu Farmajo ka caddeynayo inuusan Doorashada iyo hawlaheeda uusan shaqo yeelan doonin.
In ciidamada ay ka amar qataan R/W Rooble.
In kulamada uu yeeri doono RW Rooble Farmajan uu bannaanka ka yahay.
Waxaan intaas ahayn waxaa I jiid aan ku jiidee waa gacmo daalis. Reer Babarow Muuse waa kaa!! Farmajo waa kaas.